SAWİRO: A.Madoobe oo la kulmay İsmaci Cumar Geelle & Barre oo Jabuuti kusii jeeda |
SAWİRO: A.Madoobe oo la kulmay İsmaci Cumar Geelle & Barre oo Jabuuti kusii jeeda
Ahmed Madoobe oo baryahan socdaal ku joogay wadanka Jabuuti ayaa waxaa uu kulan la qaatay madaxweyne Ismaciil Cumar Gelle oo had iyo jeer qaabila siyaasiyiinta iska soo horjeeda ee Soomaalida, kuwaasi oo midba aragtidiisa ula taga in laga soo dhageysto.
Ahmed Madoobe ayaa u sheegay madaxweynaha Jabuuti inuu yahay hoggaamiyaha maamulka Jubba ee Kismaayo ka howlgala islamarkaana uu doonayo inuu xirir toos ah la yeesho dowlada Jabuuti si la mid ah kan uu la leeyahay dowlada dhistay maamulkiisa ee Kenya.
Waxaana warar hoose oo la helay ay sheegayaan in Madaxweynaha Jabuuti Ismaciil Gelle u sheegay inuu wixii Soomaaliya la xiriira uu kala shaqeynayo dowlada dhexe ee Soomaaliya balse uusan xirir toos ah la yeelan karin maamul gobolleedyada is magacaabay ee ka soo horjeeda dhismaha dowlad adeg oo la helo.
Dhinaca kale Madaxweynaha Jabuuti ayaa ku booriyey Ahmed Madoobe iyo wafdiga kale ee la socday inay la shaqeeyaan dowlada Soomaaliya islamarkaana ay danta dalalka shisheeye aysan u dhaga-nuglaan.
Sidoo kale dowlada Jabuuti ayaa u fududeysay Ahmed Madoobe iyo raga la socda inay bal u daawasho tagaan goobaha muhiimka u ah taariikhda iyo dowladnimada Jabuuti si ay wax ugu qaataan. Waxaana ka mid ah meeshaasi dekeda Jabuuti oo si weyn loo casriyeeyey.
Dhanka kale Gollaha nabada iyo Midnimada Jubbooyinka ee uu hoggaamiyo wasiirkii hore ee gaashaandhiga Soomaaliya Col, Barre Hiiraale ayaa wafdi ka socda waxaa lagu wadaa inay gaaraan Jabuuti si ay dhankooda ula kulmaan Ismaciil Cumar Geelle islamarkaana ugu gudbiyaan xaqiiqada dhabta ah ee ka jirta gobolladaasi.
Wafdiga mucaaradka oo aan si rasmi ah loo shaacin cidda hoggaamin doonta ayaa waxaa loo badelinayaa inuu horkaco Dr, Abdi Shire Warsame, waxaana mar aan iskudaynay in aan la xirirno si aan wax uga ogaano xilliga ay ku wajahan yihiin Jabuuti ayeysan inoo suurtagelin.
Dalal kale oo ka mid ah kuwa deriska ayey dhawaan cagta marin doonaan gollaha nabada iyo midnimada Jubbooyinka si siyaasadooda ku aadan gobolladaasi u noqoto mid miisaaman oo aysan dhinaca Ahmed Madoobe un wax uga dhageysan